I-Ezviz CTQ2C, uphononongo lwekhamera yokujonga i-wifi yangaphakathi | Iindaba zeGajethi
Siphinda sivavanye kwiActualidad Gadget a Ikhamera yokujonga i-wifi. Ngeli thuba, ngesandla senkampani ye-Ezviz, sikwazile ukubona i- I-Ezviz CTQ2C. Ikhamera edibanisa zonke iimpawu esinokuthi sizidinge ekusebenziseni okuqhelekileyo.
Ukuba ufuna ukugadwa ekhayeni lakho, kwishishini lakho okanye eofisini kwaye awungomnye wabo bathanda ukuhlawula iifizi zenyanga, u-Ezviz usinika ukhetho olunomdla. Ikhamera ye-wifi ekwaziyo ukuba yiyo soloko uqaphele kwaye urekhode yonke into into esiyifunayo ngamaxesha onke. Ukongeza, okwethutyana sikunika ikhowudi ekhethekileyo ngesaphulelo esiyi-20%.
1 Ukujonga ngokufanelekileyo ngaphandle kwemali yenyanga
2 Uyilo kunye nokubonakala kwe-Ezviz CTQ2C -TT2
3 Itekhnoloji esinayo incinci kakhulu
4 Itheyibhile yokubalula ubuGcisa
5 Iinkonzo kunye neengozi zekhamera ye-Ezviz CTQ2C
Ukujonga ngokufanelekileyo ngaphandle kwemali yenyanga
Iikhamera zokujonga i-Wi-Fi yenye yezona zinto zibalulekileyo kwikhaya elizenzekelayo ekhaya. Amandla lawula ngubani ongena ashiye, okanye wazi ngokuchanekileyo ukuba, akukho mntu ungenayo, kubalulekile. Kwaye une Ukujonga iiyure ezingama-24 ngaphandle kwesidingo sokuqesha ialam okanye inkampani yezokhuseleko kukwathetha ukonga. Thenga ikhamera yakho ye-EZVIZ CTQ2C apha ngexabiso elihle kwiAmazon.
Ifemu ye-Ezviz kudala ivelisa iimveliso ezinxulumene nezokhuseleko. Kwaye kukho iipakethe ezininzi ezinomdla kwiwebhusayithi yazo eziza kusinceda siphumeze ukhuseleko lwekhaya lethu ngemali encinci. Ikhamera ye-Ezviz CTQ2C yiyo enye yeemveliso zeenkwenkwezi zomgangatho kunye nezibonelelo ezibonelelayo.
Kude kube kutshanje, iinkqubo zokujonga ngasese zazifikeleleka kuphela kwabo babenakho ukuhlawula umrhumo wenyanga nenkampani yezokhuseleko esemsebenzini. Ngoku, Enkosi kunxibelelwano lwe-wifi lolu hlobo lwekhamera, kunye nonxibelelwano lwedatha yee-smartphones zethu sinokudityaniswa nendlu yethu ngamaxesha onke. Ukuba nekhaya lakho okanye ishishini lakho liphantsi kolawulo ayiseyongxaki yotyalo-mali olukhulu. Khumbula ukuba kude kube nguJuni 6 usebenzisa ikhowudi BLUSENSCOM uza kufumana isaphulelo se-20%.
Uyilo kunye nokubonakala kwe-Ezviz CTQ2C -TT2
Ikhamera ye-wifi ye-Ezviz CTQ2C inefayile ye uyilo lwangoku olunelayini yanamhlanje kujongeka kulungile naphina. Izipikili zivuliwe iimilo okweqanda itaper leyo emazantsi. Y eyakhiwe ngezinto ezisemgangathweni zeplastiki kunye nokumelana eliphezulu. Ngaphandle kwamathandabuzo isixhobo esifanelekileyo ukugqibezela uthungelwano lwezixhobo zasekhaya ezidityanisiweyo. Ikhamera ebangela umdla ngakumbi isazi ukuba injalo iyahambelana nomncedisi welizwi we-Alexa.
Ine- isetyhula, malunga singayijikeleza ngama-360 degrees. Isiseko esinika uzinzo oluyimfuneko lokurekhoda ngokufanelekileyo. Ngaphambili kukho ilensi, ebonelela ngokurekhodwa kwi Umgangatho we-720p HD. Apha ngezantsi kukho ifayile ye- isivamvo sokuhambahamba. Kwinxalenye esezantsi yomzimba wakhe, sifumana ii-microphone zesandi ezibini. Inkcukacha eya kwenza ikhamera yethu ye-wifi isebenze ukunxibelelana ngayo.
Ukuba ujonga eyakho ngasemva, embindini ngu isithethi. Imveliso yeaudiyo enamandla amakhulu kunokuba bekulindelwe, ekuya kuba lula kuthi ukunxibelelana nesicelo. Ecaleni kwakhe yi ikhadi le-SD elincinci ukugcina iividiyo. Sinefayile ye- setha kwakhona iqhosha eya kuthi isetyenziselwe ukubuyisela useto lwasefektri kunye nokunxibelelana. Kwaye i izibuko lonxibelelwano "ukunika ubomi" ngetikiti Micro USB. Apha sifumana enye yee-buts ezincinci, kwaye yile kamera kufuneka ihlale iqhagamshelwe kuba ayinabhetri.
Kwisiseko sayo sifumana umazibuthe onamandla iyakusisebenzela ukubeka ikhamera kuyo nayiphi na indawo ethe nkqo okanye nakwisilingi. Ngesiqwenga esinomazibuthe esinokujijwa okanye sincanyathiselwe naphi na, ikhamera ye-Ezviz "inamathela" ngokubamba okukhuselekileyo nokungaguquguqukiyo. Enye inkcukacha esiyithandayo kwaye iluncedo. Ukuba iyakuqinisekisa njengenkqubo yokhuseleko kwikhaya lakho thenga ikhamera yakho ye-EZVIZ CTQ2C ngoku kwiAmazon.
Sebenzisa ikhowudi yokwazisa esebenzayo kude kube nge-6 kaJuni «BLUSENSCOM» kwaye ufumane isaphulelo se-20%
Itekhnoloji esinayo incinci kakhulu
Njengoko sele sithethile, inkampani ye-Ezviz inayo Igama elihle Yokwazi ukubonelela iimveliso ezinexabiso elihle lemali. Ikhamera ye-Ezviz CTQ2C bubungqina obucacileyo boku. Yonke itekhnoloji yekhamera yokujonga imeko-ngobugcisa ngexabiso elingenakubethwa.
El Inkqubo yeaudiyo ezimbini ukuba i-Ezviz iya kuyisebenzisa Ukusebenzisana ngokupheleleyo. Enkosi kwimakrofoni yayo, kunye nesithethi sayo esincinci kodwa esinamandla sinokuba nencoko ngokusebenzisa iApp esemthethweni yenkampani. Thetha kuyo okanye umamele phezulu kwaye ucace kule nto ixelelwa ngumntu kwelinye icala.
Ukongeza kwifayile ye- Umgangatho we-720p HD wokurekhoda, Iimpawu zeEzviz CTQ2C Umbono wobusuku obuphezulu. Iyakwazi ukukrola ukuya kuthi ga kwi-7,5 yeemitha kude. Ikwanayo ne isivamvo sokuhambahamba ukuba sinokumisela ukunxibelelana ngokuzenzekelayo. Ulawulo olungagungqiyo lokufikelela kwishishini lethu okanye ekhayeni ukuze sikwazi ukulibona nanini na kwaye naphi na kwi-smartphone yethu.
Siyabonga ku Ukudityaniswa kwe-Wi-Fi ye-2.4 GHz siza kuba ne umfanekiso ozinzileyo kunye nomgangatho ngamaxesha onke. Kwifayile kunye nokurekhodwa kwemifanekiso esiyifunayo singafaka ifayile ye Micro SD ukuya kuthi ga kwi-128GB. Nangona sinokukhetha i ukhetho lokugcina umxholo wokurekhodwa kwilifu Ezviz ibonelela ngeephakeji zokugaya ezahlukeneyo. Kwinto ebiza imali kuyo nayiphi na inkampani yokujonga thenga ikhamera ye-EZVIZ ngoku kwaye yonke into iphantsi kolawulo.
La Uhlelo lokusebenza lwe-Ezviz luyilelwe ngokwesiko ukuze ukusetyenziswa kwekhamera yethu kube lula kwaye kube lula. Isixhobo esibalulekileyo ukuze sikwazi ukufumana okungakumbi kuyo kunokwenzeka kwizibonelelo esizifumana ku-Ezviz ngale khamera yokujonga.
Umthuthukisi: EZVIZ Inc.
U bunzima 340 g
Ubukhulu 11 x 5.8 x 3.8
Ixabiso 34.99 €
Ikhonkco lokuthenga I-EZVIZ CTQ2C
Ikhowudi yokunyusa IBHINTSI
Iinkonzo kunye neengozi zekhamera ye-Ezviz CTQ2C
Emva kweentsuku ezimbalwa zokuvavanywa ngale cam ye-wifi esebenzayo sinokukuxelela amava ethu omsebenzisi. Kwaye ke chaza ukuba yeyiphi, ngokoluvo lwethu, izinto ezinokuphuculwa kule khamera. Kunye nemiba esiyithandileyo.
Ukuqala kwisiseko esasikuso ngaphambili imveliso efumana amanqaku aphezulu, ngakumbi xa ucinga ngokubonelela ngexabiso layo. Into ebaluleke kakhulu, ixabiso lentengo, xa sinokukhetha ukuba nayo inkqubo yokhuseleko ethembekileyo nekhuselekileyo ngaphandle kwesidingo sokutyala imali kwimirhumo yenyanga. Kwaye ungalibali ukuba kude kube nguJuni 6, usebenzisa i cikhowudi yokukhuthaza «BLUSENSCOM» Uya kuba nesaphulelo se-20% eyongezelelweyo.
La interactivity enikezelwa yinkqubo yakho ukumamela kwento eviwayo yenye yeenzuzo zayo ezinkulu.
El uyilo lwanamhlanje kunye ukunciphisa ubungakanani Benza igajethi engangqubani naphi na ekhaya, kwinkampani okanye kwishishini.
Isiseko seMagnetic kunye nesincedisi ngemagnethi ukuze sikwazi ukubeka kwindawo ethe nkqo.
Ukusetyenziswa kwesiko eyenza ukuba ikhamera ibengcono ngakumbi.
Uyilo kunye nobukhulu
El isinxibelelanisi sokutshaja i-USB encinci ihlala iphantsi kancinci kwaye intambo igoba ngokungaqhelekanga.
Ayinayo ibhetri yayo kwimeko apho sifuna ukuyitshintsha okwethutyana ngaphandle kwesidingo sekhebula.
Ayinayo intshukumo yeemoto ke asinakho ukujikeleza umfanekiso ngaphandle kokwenza ngesandla.
Isidibanisi esime kakubi
Ayinayo imoto yokuhamba
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Ukuphonononga kwakhona ikhamera ye-wifi yangaphakathi Ezviz CTQ2C
Yintoni entsha kwi-iOS 13